VPS Hosting | Shwe Web Hosting | Myanmar
သီးသန့် OS / သီးခြားသတ်မှက်ထားသော RAM နှင့် Disk Space
Virtual Private Server (VPS) ဆိုသည်မှာ Virtualization ပြုလုပ်ထားသော Server ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် Operating System (OS) install ပြုလုပ်ကာ Web based Application အကြီးစားများ ၊ Traffic များ၍ Resource ပိုသုံးသော Website များ ၊ Email အများအပြားအသုံးပြုသူများ ၊ Client များအတွက် Website ရေးဆွဲသောသူများ သီးသန့် Host လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
သီးခြားသတ်မှက်ထားသော RAM ၊ သီးခြားသတ်မှက်ထားသော Disk Space များ ၊ Full Root Access များ ၊ Independently Reboot ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း အစရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Dedicated) CPU2Cores (Equal Share on Xeon E5 Processor)4Cores (Equal Share on Xeon E5 Processor)
(Dedicated) RAM2GB2GB3GB4GB4GB6GB
Disk Space 75 GB 50 GB (SSD) 90 GB 100 GB (SSD) 115 GB 150 GB (SSD)
Bandwidth 2,000 GB 2,000 GB 3,000 GB 3,000 GB 4,000 GB 4,000 GB
One time Setup Fee (in USD) $45
Monthly Fee / လစဉ်ကြေး
(in USD) $58.99 $58.99 $82.99 $88.99 $98.99 $114.99
Virtual Private Server (VPS) isamethod of splittingaserver as VPS bridge the gap between shared web hosting and dedicated servers. With full root access, you are able to install full-fledged operating system, advanced software and each server can be independently rebooted.
Shwe Hosting မှ ရောင်းချသည့် VPS Hosting ၏ အားသာချက်များ